तथ्याङ्कमा देखिएको अर्थतन्त्रको डरलाग्दो तस्बिर
सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यद्यपि यस्ता परिसूचकहरु नकारात्मक दिशामा गइरहेका छन् । व्यापारघाटा अहिलेसम्मकेै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । हाम्रा उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात अत्यन्त कमजोर छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न अत्यन्त असफल भएको छ । समयमै पुँजीगत खर्च गरेको तथ्याङ्क एकदमै कमजोर छ । जिडिपिमा औद्यौगिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्त कमजोर छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः खुम्चदो अवस्थामा छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुक समृद्ध ? कसरी हुन्छौँ हामी सुखी ? के राज्यले तिमीहरु खुसी र सुखी होऔ भनेको भरमा हामी त्यस्तो हुन्छौँ त ? प्रश्नहरु सामान्य भए पनि हृदयस्पर्शी छन् । के अझै हामी जुन जुन शासकहरुले जे जे भन्छन् त्यो पत्याएरै बस्ने हो ? आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा मुलुकको व्यापारघाटा २२ अर्ब मात्र थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको व्यापारघाटा वार्षिक एक खर्बले बढ्दै गएको छ । १० वर्ष अघि एक खर्ब ५४ अर्ब रहेको व्यापारघाटा गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ ।
यस हिसाबले १० वर्षमा व्यापारघाटा १० खर्बले बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा मुलुकले एक खर्ब १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेको छ । पहिलो महिनामै कुल वस्तु व्यापारघाटा ५१ दशमलव एक प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । तर विडम्बनाको कुरा के छ भने एक महिनामै यत्रो ठूलो डरलाग्दो तथ्याङ्कको व्यापारघाटा व्यहोर्ने हामी नेपालीले निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने ज्यादै लाजमर्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७५­/७६ को पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुक समृद्धतर्फ नजानुको कारण हाम्रो निकासी व्यापार कमजोर हुनु हो । सरकारले अघि सारेको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण नगरी सम्भव छैन । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब छ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । कृषिप्रधान देशको लागि यत्रो ठूलो परिमाणको आयात ज्यादै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो । कहिले हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ यो गम्भीर बहसको विषय हो । २०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो ।
सरकार आफैं निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तुहरु निर्यात गर्दथ्यो । विगतका राम्रा कामको अनुशरण किन वर्तमान सरकारले गर्दैन ? यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो गम्भीरता देखा परेको छैन । मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि परनिर्भरता घट्ने आशा गरिएको थियो तर संविधानसभाको निर्माणपछि बनेको संविधान र त्यो संविधानअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मुलुकमा झन परिनिर्भरता बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा रेमिट्यान्सको आप्रवाह दुई अर्ब १५ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँचखर्ब ४३ अर्ब, आव २०७१/०७२ मा छखर्ब १७ अर्ब, आव २०७२/०७३ मा छ खर्ब ६५ अर्ब आव २०७३/०७४ मा छ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने सात खर्ब नाघेको छ । यसले के देखाउँछ भने परनिर्भरताको प्रभाव हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दो छ । हाल दैनिक झन्डै १५०० युवा हरेक दिन विदेशिने गरेका छन् । यसरी युवाशक्ति विदेशिनु राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो होइन । मुलुकमा रेमिट्यान्सको प्रभाव उच्च छ तर त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग भइरहेको छैन । नेपाल जीवन मापन सर्वेक्षणअनुसार आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने पुँजी निर्माणमा मात्र दुई दशमलव चार प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । यो ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो ।मुलुकका शासकहरुले जतिसुकै समृद्धका गफ गरे पनि हाम्रो अर्थतन्त्र छाया अर्थतन्त्रले थलिएको छ । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि छाया अर्थतन्त्रको आयातन बढ्दो रुपमा छ ।
कुनै पनि राष्ट्रका लागि छाया अर्थतन्त्र बहुआयामिक र चुनौती हुने गर्दछ । विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रले छाया अर्थतन्त्रलाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छन् तर हाम्रो राष्ट्रको सरकारले सगर्व भन्छ, औपचारिक बरावर अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थात कुल अर्थतन्त्र मध्ये ५० प्रतिशत औपचारिक र अर्को ५० प्रतिशत छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७२/७३ सम्ममा छ खर्ब १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनौपचारिक आयात भएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छाया अर्थतन्त्रले चुनौती दिएको छ । मुलुक समृद्ध हुन नसक्नुका पछाडिका कारण छाया अर्थतन्त्र प्रमुख रुपमा आएको छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको लागि उद्योगले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आज विकसित कहलिएका मुलुकहरु औद्योगिक विकासको कारण उन्नतिको चुचुरोका छन् । तर औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरु विकासको पथमा निकै पछि परेका छन् । अहिलेको साम्राज्यवाद एंव विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिमार्फत विगत केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो क्रममा छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकोे नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल पाँच दशमलव ६७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादनमुलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसायीमा व्यापार प्रतिमोह बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकमा ठूला व्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरु पनि उद्योगभन्दा ट्रेनिङतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आव ०७३÷७४को जीडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै छ । तर थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको योगदान भने १३ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । राज्यको गलत नीतिका कारण उद्योगीहरु उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दा व्यापार गर्न जोड दिएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आम निर्वाचनबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुलुकको इसारामा आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको नीति लिएपछि औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था मुलुकको कमजोर रह्यो । देशका उद्योग धन्दाहरु कौडीको मोलमा निजीकरण गरियो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न तयार भए । अझ भारतीय स्वार्थमा नेपालका सबै महत्वपूर्ण उद्योगधन्दा बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै काल खण्डमा लाखौं भारतीयलाई नागरिता दिने काम भएको हो ।
गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै बेलाबेलामा मधेसीका नाममा राजनीति र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रघाती सम्झौता, भ्रष्टाचारका ठूला स्क्याण्डल र दरबार हत्याकाण्ड उनकै पालामा भयो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई समृद्धिका ठूला ठूला सपना बाँडे पनि पुँजीगत खर्च गर्न अत्यन्त असफल भएको छ । विगत झण्डै डेढ दशकदेखि पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो पुँजीगत खर्च । त्यतिमात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । पुँजीगत खर्चको अवस्थाको ग्राफ निराशाजनक बनिरहेको छ । जसको कारण दीर्घकालसम्म नै यसको नकरात्मक प्रभाव बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालू खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड मात्र निर्धारित गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ को भन्दा कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब छुट्याएको थियो । यस वर्षको पुँजीगत खर्च बजेटको २३ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ भने चालू खर्च ६४ दशमलव तीन प्रतिशत छ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११ दशमलव आठ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्च सुक्दै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको समृद्धिको नारा केवल जनतालाई बेकुफी बनाउने कुरा मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दुई महिनामा दुई प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च अर्थात पाचँ अर्ब ८५ करोड मात्र भएको पाइएको छ ।
अन्त्यमा कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । तर हाम्रा आर्थिक परिसूचकाङ्कहरु नकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण हाम्रो नेतृत्व हो । शासन फेरिए पनि शैली शासकको नफेरिएको कारणले यस्तो हुन गएको त्यसको लागि सबै भन्दा पहिले हामीले संरचानामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । संरचना परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो छैन त्यसको लागि ठूलो संघर्षको खाँचो छ । यसतर्फ आम नेपालीको ध्यान जान जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)